Fanafarana fiara avy any amin'ny EU mankany UK | Ny fanafarana ny fiarako
Fanafarana fiara avy any amin'ny EU mankany UK
Izahay dia manam-pahaizana manokana amin'ny fisoratana anarana any UK izay mampiasa Certificate of Conformity.
Azonao atao ny mividy ny taratasy fanamarinana aminay ary misoratra anarana ihany koa - serivisy iray fijanonana iray!
Manafatra ny fiaranao mankany UK avy any Eropa?
Ny ankamaroan'ny fiara fisoratanay avy any Eropa dia entin'ny tompony any UK ary efa eto izy ireo, mitaky tsotra izao ny fanodinana fisoratana anarana Import miaraka amin'ny Certificate of Conformity, ny VCA ary ny DVLA. Azontsika atao ny mandray an-tanana ny fizotran'ny fitaterana ny fiaranao avy amin'ny fanjakana mpikambana EU rehetra any UK raha ilaina izany.
Ny ankamaroan'ny fiara dia mameno ny fiara amin'ny alàlan'ny fiara fitateram-bahoaka feno fiantohana tanteraka izahay, nefa koa manolotra serivisy fandefasana entana avy any amin'ny faritra lavitra kokoa. Nandritra ny fitaterana ny fiara dia voalamina tanteraka ary amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia hatolotra amin'ny trano fonenanay, na izany aza, vitsivitsy amin'ireo mpanjifanay no maniry ny hatolotra azy ireo ny fiara ary hampiasa ny serivisinay fotsiny hanodinana izay taratasy takian'ny DVLA hisoratra anarana fiara. Miankina amin'ny tarehin-javatra manokana momba ny fiara izany, koa aza misalasala mifandray raha tsy azonao antoka.
Raha te hitondra ny fiara ianao amin'ny fahatongavanao any Royaume-Uni ary mitaky ny serivisinay tsotra izao amin'ny fiatrehana ny antontan-taratasy. Azafady mba jereo ny fiantohana raha hitondra ny fiaranao any Angletera. Mety tsy mety io fa aza misalasala mifanerasera raha mila fiantohana ianao - mampiasa fiantohana marobe izahay izay afaka miantoka fiara mampiasa ny laharana VIN.
Ekipa matihanina faran'izay mahomby no mahatonga ity orinasa ity hampirisihina mafy. Izy ireo dia mandray an-tanana ny zava-drehetra eo noho eo ary mitazona anao ho tonga saina mandritra ny dingana rehetra. Mendri-piderana ny fiaraha-miasa ataon'izy ireo ary olona mahafinaritra ihany koa izy rehetra! Tsy manenina ary tsy misy adin-tsaina! Misaotra ny Fiaramanidin'ny Fiarako nanampy anao! "
- Opel Zafira avy any IE - Irlandy
Latsaky ny 10 taona ve ny fiaranao?
Rehefa tonga any Angletera ianao dia mila manaraka ny fankatoavana karazana UK. Azontsika atao izany amin'ny alàlan'ny dingan'ny antsoina hoe fanekena ny roa tonta na amin'ny alàlan'ny fitsapana IVA.
PROSESY MANANA FANAMPINY HO AN'NY VEHICLES AO AMIN'NY 10 TAONA
Samy hafa ny fiara rehetra ary ny mpanamboatra tsirairay dia manana fenitra fanohanana isan-karazany amin'ny fanampiana ny mpanjifany amin'ny alàlan'ny dingam-panafarana, noho izany azafady manontania mba hahafahanay mifanakalo hevitra momba ny safidy hafainganam-pandeha sy vidiny mety indrindra amin'ny toe-javatra iainanareo tsirairay.
Ny fiara mpamily havia havia avy any Eropa dia mitaky fanovana vitsivitsy, ao anatin'izany ny maodelin'ny jiro mba hisorohana ny famirapiratan'ny fifamoivoizana ho avy, ny speedo mba hampisehoana ny kilaometatra isan'ora famakiana sy ny jiro zavona any aoriana raha mbola tsy mifanaraka amin'ny rehetra izao. Izahay dia nanamboatra katalaogy be dia be momba ny maodely sy ny maodelin'ny fiara izay nohafaranay, ka afaka manome anao ny tombam-bidiny haingana amin'ny zavatra ilain'ny fiarainao manokana.
Fifandraisana tena matihanina sy tsara, ny zavatra rehetra dia nandeha araka ny fampanantenan'ny fe-potoana tamin'ny resadresaka voalohany. Asa tena tsara tazomy toy izao.
-2016 Volkswagen Golf 1.6 TDi, LHD avy any RO - Romania
PROSESY MANANA FANAMPIANA ho an'ny fiara mihoatra ny 10 taona
Ireo fiara avy ao anatin'ny EU izay mihoatra ny folo taona dia tsy ekena ny fankatoavana. Tsy midika akory izany fa tsy mitaky fanovana na asa vao vita izy ireo alohan'ny ahafahana misoratra anarana - fa manetriketrika kokoa ny lalana mankany amin'ny fisoratana anarana.
Inona no tafiditra amin'ny fanafarana ny fiaranao?
Ao amin'ny Fanjakana Mitambatra dia tokony ho 'mendrika' ny fiara ary hitaky MOT izy ireo hanaporofoana fa mety amin'ny tanjona sy azo antoka izy ireo.
Ny fiara be indrindra dia mety mitaky fanovana madinidinika mba hanitsiana ny lamina tariby mba hahazoana antoka fa tsy hanajamba ireo mpampiasa lalana hafa ny jiro. Ny jiro zavona any aoriana dia takiana ihany koa any Angletera, noho izany dia mila fampifanarahana izy ireo raha tsy manana ilay fiara.
Na izany aza, miankina amin'ny fiara ihany ny fanovana rehetra amin'ny ankapobeny.
Manana serivisy mailaka sy mailaka avy amin'ny fanafarana fiara aho ary manoro ny fahaizan'izy ireo hikirakira ny lafiny rehetra amin'ny orinasa ......
-1997 Toyota Hilux, 2.4 Diesel, Green, Maka amin'ny FR - France - Fiara UK taloha
Ohatrinona ny hetra ampidirina rehefa manafatra fiara avy any UE mankany UK?
Taorian'ny fiafaran'ny vanim-potoana tetezamita Brexit, fitsipika samihafa no mihatra amin'ny hetra fanafarana rehefa manafatra fiara mankany UK.
Raha mifindra any Angletera ianao ary manana ny fiaranao nandritra ny 6 volana mahery ary mipetraka any ivelan'ny UK mandritra ny 12 volana mahery, dia azonao atao ny manafatra ny hetra amin'ny fiara amin'ny alàlan'ny HMRC Transfer of Residency scheme.
Raha nividy fiara tany amin'ny Vondrona Eoropeana ianao ary nanafatra izany tany Angletera, dia handoa VAT fanafarana 20% ianao raha latsaky ny 30 taona, ary VAT 5% raha mihoatra ny 30 taona. Izany dia kajy amin'ny faktioran'ny fividiananao sy ny saran'ny fitaterana mankany UK.
Azonao atao ve ny manampy amin'ny famindrana ny fiarako?
Na aiza na aiza toerananao dia matoky izahay fa afaka manolotra fitaovana azo antoka sy azo antoka amin'ny fitaterana ny fiaranao.
Na mandefa fiara isika na mampiasa kamiaobe an-tanety dia manana tambajotram-pifandraisana maro be izahay izay afaka manampy amin'ny fizotran'ny fahazoana ny fiaranao mankany Etazonia.
Maninona no mifidy anay hanafatra ny fiaranao avy any EU mankany UK?
Rehefa nanao soa aman-tsara ny mpanjifanay izahay mba hidirany amin'ny mpitantana kaonty DVLA natokana ho an'ny My Car Import manokana, rehefa mandalo ny dingana fitsapana, dia azo ekena haingana kokoa ny fisoratana anarana noho ny fomba hafa.
Manomboka amin'ny fitaterana ny fiaranao hatrany amin'ny fanandramana sy fisoratana anarana - izahay no miandraikitra ny zava-drehetra. Ny sisa tavela dia ny fampifanarahana ireo takelaka laharana anglisy vaovao anao ary omaninay ny fiara na hanangonana na halefa any amin'ny toerana tianao.
Tsy mora kokoa ny dingan-dàlana iray mirindra sy mety izay namboarina nandritra ny taona maro, ny fanafarana fiara avy any Eropa mankany UK. Raha te hahatratra ny takinao sy hahalala bebe kokoa dia mifandraisa aminay anio amin'ny +44 (0) 1332 81 0442.
Manafatra fiara avy any amin'ny EU ihany ve isika?
Ny vondrona eropeana dia manana ampahany betsaka amin'ny fanafarana fiara any amin'ny Fanjakana Mitambatra, na eo aza izany dia maro ny fanafarana manokana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izay ampianay isam-bolana.
Manampy amin'ny famindrana ireo mpifindra monina mifindra monina any amin'ny Fanjakana Mitambatra izahay avy any Aostralia, ary na dia ny olona manokana manafatra fiara mahazatra avy any Etazonia aza.
Tsy misy toerana tsy ahafahanay manafatra sy misoratra anarana amin'ny fiara, koa aza misalasala mifandray raha ivelan'ny EU ny fiara.
Karazana fiara inona no iarahantsika miasa?
Manomboka amin'ny fiara famokarana iray ka hatrany amin'ny supercar milanja iray kilao dia nanampy tamin'ny fisoratana anarana amina fiara maro samy hafa izahay. Ny làlana mankany amin'ny fisoratana anarana dia tsy mitovy amin'ny fiara rehetra, saingy matoky izahay fa afaka manampy.
Ny fomba tsara indrindra hahalala azo antoka dia ny famenoana ny fangatahana fangatahana teny nalaina izay manome anay ny antsipiriany rehetra izay mila fantatray hanome anao anao teny nalaina marina.
Azontsika atao ve ny manompo ny fiaranao? Sa manolotra fanampim-panazavana tsy azo atao?
Tsy toy ny mpifaninana aminay, faly kokoa izahay manao servisita mahazatra ho an'ny fiara mandany ny fotoanany any amin'ny toerana misy anay. Mahatsapa izahay fa ny fanompoana ny fiara dia zavatra tsara tokony hatao rehefa mandany fotoana be dia be ny fiara.
Manolotra antsipiriany matihanina ihany koa izahay hanavao ny fiaran'ny fiaran'ny fiaranao sy ny mpanaraka naoty Thatcham izay mety hampidina ny fiantoham-piainanao amin'ny fisoratana anarana.
Ny Fiaramanidin'ny Fiarako dia mazoto amin'ny môtô ary antenainay fa ny fangatahana rehetra anananao dia azonay tanterahina.
Ianao ve mila mitondra ny fiara mankany amin'ny toerana misy antsika?
Miankina amin'ny taonan'ny fiara mety tsy ilaintsika akory ny tonga any amin'ny toerantsika. Raha mihoatra ny folo taona ny fiara amin'ny ankamaroan'ny tranga dia azonao atao ny manao ny fanovana any amin'ny garazy eo an-toerana izay takiana amin'ny fanarahana.
Izahay dia mikarakara izay antontan-taratasy ho anao. Mamonjy fotoana ary midika fa tsy mila tonga eto mihitsy ny fiaranao.
Raha mety amin'ny fisoratana anarana lavitra ny fiaranao dia hampahafantarinay anao aorian'ny famenoanao taratasy iray ho an'ny teny nindramina.
Inona avy ireo lalàna momba ny fanafarana vonjimaika ny fiaranao?
Raha tsy mikasa ny hipetraka any Angletera mandritra ny fotoana lava be ianao, ary efa ao amin'ny UE ny fiara dia azonao atao ny mampiasa ny takelaka vahinyo nefa tsy misoratra anarana na mandoa hetra ny fiaranao any UK.
Avela ihany izany raha mitsidika ny United Kingdom fotsiny ianao fa tsy mikasa ny hipetraka eto. Ho an'ny trano maharitra - ilaina ny fisoratana anarana amin'ny fiaranao.
Ny fiara dia tsy maintsy voasoratra anarana, mandoa hetra ary miantoka fiantohana any amin'ny firenena niaviany. Ny tsy fanaovana izany dia mety hamorona olana raha sendra misy ny lozam-pifamoivoizana.
Tsy afaka mipetraka any Angletera mandritra ny 6 volana fotsiny ny fiaranao. Na dia ho an'ny fitsidihana fohy marobe mandritra ny 12 volana aza dia ekena ihany koa.
Raha manapa-kevitra ny hitazona ny fiaranao any Angletera mandritra ny fotoana lava kokoa ianao amin'izany, azafady aza misalasala mifandray amin'ny fisoratana anarana.
Te hitondra ny fiarako aho rehefa misoratra anarana?
Ho an'ny ankamaroan'ny fiara izay tsy mitaky fanadinana IVA dia tsy mila manana ny fiaran'ny EU ianao eo an-toerana mandritra ny fotoana maharitra. Hitanay ny fironana mitombo eo amin'ny mpanjifa izay nitondra ny fiarany nankany amin'ny Fanjakana Mitambatra ary mila ny fanovana azy ireo fotsiny mba hanarahan-dalàna. Raha mbola mandeha mivezivezy amin'ny takelaka fisoratana anarana ianao ary manarona anao ny fiantoham-piaranao, dia matetika izahay no afaka mampiditra ny fiarananao amin'ny 'fisoratana anarana iray andro'
Entinao any amin'ny trano fonenanay any Castle Donington ny fiaranay ary azonay atao ny manamboatra ny fanovana mba hahatonga ny fiaranareo hifanaraka amin'ny fampiasana any Angletera mandritra ny fiandrasanao. Avy eo dia entina hanaovana fitsapana MOT mba hahazoana antoka fa mendrika ny lalana ny fiara ary raha tsy misy ny olana dia homena mari-pankasitrahana momba ny làlana MOT ianao.
Raha vantany vao manana ny fanamarinana MOT anao izahay dia azonao atao ny mitondra ny fiara, miaraka amin'ny takelaka fisoratana anarana ivelany. Handefa ny fangatahana fisoratana anarana amin'ny anaranao izahay ary rehefa voaraisa ny fisoratana anarana vaovao dia azo takalozana ny takelaka vahiny amin'ny takelaka fisoratana anarana GB izay alefanay aminao.
Fomba tsotra kokoa amin'ny fisoratana anarana ny fiaran'ny EU raha mila mampiasa azy isan'andro ianao.
Raha somary lavitra ianao ary tsy afaka mankany amin'ny toerana misy anay fa ny fiaranao dia efa any Angletera dia azonay atao ihany koa ny manampy amin'ny fisoratana anarana ny fiara ary ny asa dia azo atao amin'ny garazy izay eo an-toerana miankina aminao. amin'ny asa takiana.
Ny fomba tsara indrindra hahitana ny làlana mankany amin'ny fisoratana anarana dia amin'ny teny nalaina. Hanoritra izay ilaina amin'ny fisoratana anarana ny fanafarana UE anao ao amin'ny Fanjakana Mitambatra.